युवतीहरुले सेल्फी किन र कति खिच्छन् ? - Himalayan Kangaroo
युवतीहरुले सेल्फी किन र कति खिच्छन् ?
Posted by Himalayan Kangaroo | १४ जेष्ठ २०७२, बिहीबार ०५:१८ |
कुनै युवतीले आफ्नो सेल्फी फोटो खिच्न कति समय खर्च गर्लान् ? एक अध्ययनका अनुसार एउटी युवतीले सेल्फी खिच्नका लागि दैनिक कम्तीमा ४८ मिनेटदेखि एक हप्तामा पाँच घण्टा समय खर्चने गरेको पाइएको छ । मिरर डट को डट यूकेका अनुसार राम्रो सेल्फीका लागि आवश्यक मेकअप,प्रकाश संयोजन र सहि कोण मिलाउँने नाममा युवतीहरुको औसतमा त्यति समय खर्च हुने गरेको उल्लेख छ ।
सर्वेक्षणका क्रममा हरेक १० जनामा एकजना युवतीले बाथरुममा,कारमा अथवा आफ्नो अफिसमा समेत सेल्फी लिने गर्दछन् । उक्त सर्वेक्षणमा १६ वर्षदेखि २५ वर्षसम्मका २ हजार जना युवती सहभागी थिए । त्यसमध्ये २८ प्रतिशत युवतीहरुले हप्तामा कम्तीमा एक पटक सेल्फीमा आफनै फोटो खिच्ने गरेको बताए । सर्वेक्षणमा भाग लिएका अधिकांश युवतीहरुले आफूलाई आफ्नो रुप राम्रो र आकर्षक लाग्ने वेला मात्र सेल्फी लिने गरेको बताए । यस्तै फेसबुक र ट्वीटर लगायतका सामाजिक सञ्जालहरुमा आफ्नो फोटोले पाउँने लाइकस्ले आफूहरुमा अहम्ता बढाउँने स्वीकार्दै अधिकांशले त्यसबाट अझ राम्रो सेल्फी खिच्ने उत्साह प्राप्त हुने बताए । वेलायती वेभसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डट फीलिंगयूनिक डट कमले गरेको सर्वेका अनुसार युवा पुस्तामा सेल्फी लिने चलन फेसनकै रुपमा बढिरहेको छ । उनीहरु मध्ये केही त सेल्फी स्टीम नामक मनोरोगबाट ग्रस्त नै बनेको पाइएको छ ।
सर्वेक्षणमा सहभागी युवती न्यूबी हैंड्स भन्छिन्–सेल्फीले भरिएको इंस्टाग्राम फीडबाट नयाँ नयाँ मेकअप टिप्स, कपाल सजाउँने तरिका र फिटनेश सम्बन्धी प्रेरणा समेत प्राप्त हुन्छ । करिब २७ प्रतिशत युवतीहरुले त लाइक्स पाउँनका लागि मात्र सेल्फी अपलोड गर्नेगरेको बताए । लाइक्स नपाउँने फोटोहरुलाई केही मिनेटभित्रै हटाउँने गरेको बताए ।
Previousअब थाइल्याण्ड घुमघाम ३८ सय रुपैयामा
Nextमह र मनिषा सरकारका भूकम्प दूत
जानिराखौं श्रीलंकाका १० तथ्य
१५ श्रावण २०७१, बिहीबार १३:०७